တိုင်းရင်းသူတွေရိုးလွန်းလို့ ကိုယ်တိုင် ထဘီဝတ်ပြပြီးသင်ပေးခဲ့တဲ့ ဝေဠုကျော် – CantWait2Say
ဒီတစ်ခါတော့ ဈေးကြီးနာမည်ကြီးတဲ့ အလှကုန်တွေ သုံးစရာမလိုဘဲ မျက်နှာအသားအရေကို သိသိသာသာ ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့် မှော်ဆန်ဆန် အာလူးပြုတ်နည်းလမ်းအကြောင်း မျှဝေပေးပါရစေ ။ ဒီနည်းလမ်းလေးဟာ သင့်မျက်နှာကို ခဏတာသာ ဖြူဝင်းစေတာမဟုတ်ဘဲ ထာဝရဖြူစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလို့တောင် တင်စားကြပါတယ် ပထမဆုံး အာလူးကို ဆေးကြောပြီး ပြုတ်လိုက်ပါ ။ နူးသွားပြီဆိုလျှင် အခွံခွာပြီး …
မြန်‌မာနိုင်‌ငံကို ဘယ်‌နိုင်‌ငံကမှ စစ်‌မတိုက်‌ရဲသလို မတိုက်‌နိုင်‌ပါဘူးဗျာ ဘာ‌ကြောင့်‌လဲ ? မြန်‌မာနိုင်‌ငံကို ဘယ်‌နိုင်‌ငံကမှ စစ်‌မတိုက်‌ရဲသလို မတိုက်‌နိုင်‌ပါဘူးဗျာ ဘာ‌ကြောင့်‌လဲ ?
၁။ ။ ရခိုင်‌ကိစ္စနဲ့ ဆက်‌နွယ်‌ပြီး‌တော့ ဘဂ်‌လားက စစ်‌တိုက်‌မယ်‌ဆိုရင်‌ ရှမ်းပြည်‌နယ်‌ ပမာဏ‌လောက်‌နယ်‌‌မြေထဲက‌နေဘယ်‌လို တိုက်‌မလဲ စစ်‌တိုက်‌‌နေသူတိုင်း စစ်‌နည်းဗျူဟာ သိသူများ သိနိုင်‌ပါတယ်‌ စစ်‌အင်‌အားနဲ့ စစ်‌ကစားဖို့ ‌မြေ‌နေ‌မြေထာအရ ဘဂ်‌လားက အထိနာမယ်‌ လူဦး‌ရေ‌မြောက်‌များစွာအ‌ပေါ် မြန်‌မာ့တပ်‌မ‌တော်‌ရဲ့ ဒုံးလက်‌နက်‌‌တွေ တင့်‌ကား အ‌မြေုာက်‌ကျည်‌ဆံ‌တွေ မာ‌ကျောပြီး‌တော့ ‌ခေါင်းမာတတ်‌လွန်‌တဲ့ …
မိုး​ဟေကို နဲ့ သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​ တို့ ​ပြေလည်​မှုရပြီး ဆက်​လက်​ ဇတ်​ကား ရိုက်​ကူးပါမယ်​။
“သူ့နာမည်​ ​​ရွှေရုပ်​” ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားနဲ့ ပတ်​သတ်​ပြီး အဆင်​မ​ပြေမှုတွေ ဖြစ်​ခဲ့တဲ့ သင်​ဇာဝင့်ကျော် နဲ့​ မိုး​ဟေကို တ်ို့ နှစ်​ယောက်​ဟာ ရုပ်​ရှင်​အစည်းအရုံးက တစ်​ဆင့် ဖြေရှင်း​မှုကို ​အောက်​တိုဘာလ ၂ ရက်​​နေ့ ည​​နေမှာ နှစ်​ဦးနှစ်​ဖက်​ညှိုနှိုင်း​ဆွေး​နွေးမှု ပြုလုပ်​​ပြီး ​ပြောကြားသည့်​ တိုက်​ရိုက်​ ထုတ်​လွှင့်​မှု ရိုက်​ကူး – …